आज सुनको मूल्य कति ? – Gandaki Voice
Home/अर्थ/आज सुनको मूल्य कति ?
नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा ९५ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा ९५ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
तेजावी सुन तोलामा ९४ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको पनि महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । बिहीबार तोलामा १३३० रुपैयाँमा कारोबा रभएको चाँदी शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु